त्रिविको पुन:संरचना आवश्यक- प्रिन्ट संस्करण - कान्तिपुर समाचार
त्रिविको पुन:संरचना आवश्यक
‘त्रिविको पुन:संरचना आवश्यक’ सौगात भट्टराईले लेख्नुभएको प्रतिक्रियामा केही कुरा थप्न मन लाग्यो । राष्ट्रकै गौरव बोकेको विश्वविद्यालयको भौतिक पुन:संरचनाको साथै व्यवस्थापकीय सुधार पनि अति आवश्यक देखिन्छ ।
विश्वविद्यालयको व्यवस्थापकीय पक्ष कति कमजोर छ, त्यो यहांँ लेखिरहनु आवश्यक छैन । सबै प्राज्ञ वर्गलाई अवगत नै छ । यसमा त्रिवि नेतृत्वको ध्यान जानु आवश्यक छ । अझ मैले उठान गर्न खोजेको हालै हुनगइरहेको दीक्षान्त समारोहमा दीक्षित हुने विद्यार्थीले फर्म भर्दा पाएको सास्तीको विषय हो । देशकै पहिलो विश्वविद्यालयको यो व्यवस्थापन पक्षलाई हेर्दा हामी र हाम्रो प्राज्ञिक स्तर कहांँ रहेछ, सजिलै बुझ्न सकिन्छ । देशकै यति ठूलो संस्थामा अनलाइनबाट फर्म भरेर बुझाउने र जुनसुकै बैंकमार्फत रकम बुझाउने एउटा यति सानो पद्धतिको विकास त गर्न सकिन्छ नि ? एउटा जावो फर्म भर्न दिनभर माया मार्नुपर्ने के कसैको पनि काम हुँदैन ? त्यसै त विद्यार्थी वर्गलाई काठमाडौंमा बाँच्न धौधौ भइसक्यो । यो भदौको घाममा विद्यार्थीहरू कहिले यता लाइन बस कहिले उता लाइन बस । यो संस्थाप्रति विद्यार्थीले गौरव गर्ने ठाउँ खै ? हुन त त्रिवि नेतृत्व वर्गलाई कहाँ फाइदा हुन्छ, कुन नेताको पछाडि लाग्ने ? यिनीहरूलाई नेताको चाकडी गर्नै फुर्सद छैन । विद्यार्थीको सुविधा र त्रिविको सुधारको लागि सोच्ने समय पनि छैन ।
– उद्धव सापकोटा
प्रकाशित : भाद्र २९, २०७४ १०:२०
व्यापारीको लुट्न पाउनुपर्ने माग
प्रजातन्त्रमा जायज माग राखेर बोल्ने अधिकार सबैलाई छ, हुन्छ । तर जे मन लाग्यो, त्यही नीति, नियम, कानुनविपरीत बोल्न कसैलाई’नि छुट छैन । व्यापार गर्न सबैलाई छुट छ, तर व्यापारका नाममा लुट गर्न कसैलाई पनि छुट छैन ।
आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलले दरबारमार्गका पसलहरू निरक्षण गर्दा चाहिनेभन्दा बढी मूल्य लिएर जुत्ता बिक्री–वितरण भएको थाहा पाएपछि तत्कालै ती पसलहरूमा छापा मारेर सिल मारेका छन् । त्यसको विरोधमा पसलेहरूले आन्दोलन गर्ने धम्की दिएका छन् । ‘मैले चोरेर खान पाउनुपर्‍यो’ भनी कसैले भन्छ भने त्यो सरकारले सुन्नुपर्छ भन्ने छैन । जो अपराध गर्छ, उसलाई कानुन अनुसारको कारबाही हुनुपर्छ । जसका कारण भोलिदेखि त्यस्ता गलत कार्य गर्ने आँट कसैलाई नआओस् । २४०० सय रुपैयाँ पर्ने जुत्ताको २४००० हजारसम्ममा बिक्री–वितरण भएको समाचार आइरहेको छ । यति हुँदासमेत आजभन्दा अघिको कुनै पनि सरकारको नजर त्यो ठाउँमा जान सकेको थिएन । यसरी सर्वसाधारणलाई ठग्नेहरू नै उल्टै ठग्न पाउनुपर्छ भनिरहेका छन् । कस्तो विडम्बना !